Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wararka Dibada	Shil Gaari oo khasaare dhaliyay oo ka dhacay dalka Iiraan.
Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa sheegaya in shil gaari oo ka dhacay dalkaas saacadihii lasoo dhaafay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shilkan Gaari ayaa ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Mash-had iyo Naysaabuur ee dalka Iiraan, waxaana isku dhacay gawaari kor u dhaafaya 100. Saraakiil katirsan wasaaradda gaadiidka xukuumadda Iiraan ayaa xaqiijiyay in shilkan ay ku ...	Read More »
Jariimo ka baxsan Banii aadamnimada islamarkaana inta badan ay iska indha tirayaan warbaahinta caalamka noocyadeeda kala duwan ayaa ka dhacday magaalada suniga ah ee Muusil wadanka Ciraaq. Diyaaradaha Isbaheysiga dowladda Maraykanka ay hogaamiso ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay duqeymo aad u culus ku garaaceen xaafado kamid ah magaalada Muusil, waxaana mar qur ah ay dileen boqolaal Ruux oo ...	Read More »
Hogaamiye sare oo katirsan Xamaas oo lagu toogtay Qazza.
Rag hubeysan ayaa Jiidda Qazza waxay ku dileen sarkaal katirsan garabka milliteri ee Xarakada Xamaas ee lagu magacaabo Al-Qassaam. Ninka la dilay waxaa lagu magacaabaa Maazin Fuqahaa, waxaana uu kamid ahaa saraakiisha milleteri ee Al-Qasaam, waxaana uu kasoo baxay xabsiyada maamulka Yahuudda. Afhayeenka ciidamada booliiska Qazza oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in Maazin 4 Xabadood looga dhuftay madaxa, islamarkaana ...	Read More »
Boqorka Kuweyt oo Booqasho ku tagay dalka Turkiga.
Madaxweynaha dowladda Kuwyeyt Sabaax Axmed Al-Sabaax ayaa booqasho rasmi ah wuxuu ku yimid dalka Turkiga, kadib markii cazuumaad uu ka helay dhigiisa Turkiga. Al-Sabaax ayaa caasimadda dalka Turkiga Ankara wuxuu kula kulmay madaxweynaha dalkaas Rajab Dhayib Ordogan iyo madax kale oo katirsan mas’uuliyiinta dalkaas. Labada madaxweyne waxay kawada hadleen xiriirka labada dal, iyo sidii ay u yeelan lahaayeen cilaaqaad diblumaasiyadeed ...	Read More »
Sarkaal Filastiini ah oo ku dhintay Xabsiyada Nidaamka Masar.
Warbaahinta Filastiiniyiinta ayaa qoraya warar sheegaya in Sarkaal katirsanaa booliiska Filastiin uu ku dhintay xabsi ku yaala dalka Masar oo maalmihii ugu dambeeyay uu ku jiray. Sarkaalka dhintay waxaa lagu magacaabaa Wasiim, waxaana uu katirsanaa Booliiska dalka gumeysiga ku jira ee Filastiin. Sida uu xaqiijiyay wiil la dhashay ninkan, waxaa Wasiim saddex maalmood kahor laga qabtay magaalada Al-Qaahira oo tobankii ...	Read More »
Inkabadna 10 Ruux oo ka kooban hal Qoys oo ku dhintay dalka Ciraaq.
Diyaaradaha Taxaalufka ay hogaamiso dowladda Maraykanka ayaa duqeymo cashwaa’i ah oo aan loo meel dayin waxay ka wadaan magaalada dulman ee Muusil oo dhowr bilood oo xiriir ah la kulmeysa weeraro iyo duqeymo uga imaanaya Rawaafidda iyo Isbaheysiga Reer Galbeedka. Duqeymaha ayaa joogta ka ah magaalada, waxaana mar waliba ka dhasha istish-haadka tobaneeyo Ruux. Duqeyntii ugu dambeysay ugana naxdinta badneyd ...	Read More »
Page 1 of 4112345	»	102030...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan